Cristiano Ronaldo Oo Juventus Ku Hogaamiyay Guul Ay Ka Gaadheen Lazio & CR7 Oo Isku Qoray Taariikhda Kubada Cagta & Serie A-da – Kooxda.com
HomeSerie ACristiano Ronaldo Oo Juventus Ku Hogaamiyay Guul Ay Ka Gaadheen Lazio & CR7 Oo Isku Qoray Taariikhda Kubada Cagta & Serie A-da
Cristiano Ronaldo Oo Juventus Ku Hogaamiyay Guul Ay Ka Gaadheen Lazio & CR7 Oo Isku Qoray Taariikhda Kubada Cagta & Serie A-da
July 21, 2020 Abdiwali Adan Jamac Serie A, Wararka Maanta 0
Kooxda Juventus ayaa guul ka gaadhay kooxda Lazio kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A-dakana dhacay garoonka Allianz Stadium.
Kulanka ayaa qaybtii hore ahaa mid adag oo ay labada kooxood si aad ah isugu dhawyihiin waliba la odhan karo Lazio ayaa ka fiicnayd iyaga oo qaadayay weeraro rogaal celis ah dhawr marna ku dhawaaday in ay gool dhaliyaan.
Saaxiibada Cristiano Ronaldo ayaa iyagu qaybtii hore ahaa kuwo hurday oo aan soo bandhigin qaab ciyaareed la taaban karo iyaga oo kaliya daacanayay Goolkooda.
Laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta ayay la soo bexeen miyo libaax iyaga oo si deg-deg ah Lazio gu quus gooyay kuna dilay ciyaarta.
Daqiiqadii 51-aad ayay Juventus dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Cristiano Ronaldo kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/0.
Xilli ayna Lazio ka soo kabsan naxdinta goolka 1-aad ayay Juventus sii dheeraystay hogaanka daqiiqadii 54-aad kadib markii uu Paulo Dybala daafaca Lazio ka dafay kubad kadib si sharaf leh ugu hadiyadeeyay Cristiano Ronaldo kaas oo ka dhaliyay goolkii 2-aad.
Kadib goolkaas Cristiano Ronaldo ayaa noqday xiddigii ugu horeeyay ee kubada cagta 50 gool ka dhaliya 3 Ka mid ah horyaalada ugu waaweyn yurub kadib markii uu 50 gool ka dhaliyay Serie A-da, La Liga iyo waliba Premier League.
Sidoo kale Cristiano Ronaldo ayaa noqday xiddiga ugu deg-dega badan ee 50 gool ka dhaliya taariikhda horyaalka Serier A-da isaga oo rikoodkaas ku garaacay Andriy Shevchenko.
Cristaino ayay ku qaadatay in uu 50 gool ka dhaliyo Serie A-da kaliya 60 kulan halka ay Andriy Shevchenko ku qaadatay in uu 50 gool u dhaliyo 69 kulan.
Daqiiqadii 83-aad ayay Lazio dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Ciro Immobile kadib markii uu rikoodhe galay xiddiga Leonardo Bonucci waxana ay ciyaartu noqotay 2/1.
Xiddiga Ugu Cad-Cad In Uu Ku Guulaysto Abaalmarinta Xiddiga Ugu Fiican Premier League Oo La Saadaaliyay
Koox Ingiriiska Ah Oo Dalab Rasmi Ah Ka Geysay Saxiixa Daafaca Napoli Ee Kalidou Koulibaly